Station B ႏွစ္သစ္ကူး ပါတီ စံခ်ိန္တင္ လူႀကိဳက္ မ်ား မႈ အညႊန္း ကိန္း သန္း ၃ ၁၀ ရရွိ - Pandaily
Jan 01, 2022, 22:50ညနေ 2022/01/06 23:33:14 Pandaily
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း လူငယ် မျိုးဆက်သစ် ဗီဒီယို အသိုင်းအဝိုင်း B ကိုကျင်းပ ခဲ့သည်“၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဲ့ အလှ ဆုံး ည” နှစ်သစ်ကူး ပါတီသောကြာ နေ့တွင် ပရိသတ် အတွက် ယဉ်ကျေးမှု ပွဲ တော်သည် နှစ်ကုန် ပိုင်း ဖြစ်သည်။ Live လႊင့္ ျခင္းျဖင့္ လူႀကိဳက္ မ်ား မႈ အညႊန္း ကိန္း အျမင့္ဆံုး
ယခုနှစ်တွင် ပလက်ဖောင်း သည် ဆန်းသစ် သော ကြည့်ရှု ခြင်း အတွေ့အကြုံကို ပေးသော “Parallel Performance” mode ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် ၁၆း၃၀ မတိုင်မီ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ရန် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကြည့်ရှု သူများသည် Fantasy Space သို့မဟုတ် Magic Space ဗားရှင်း မှတဆင့် ပါတီ ကိုကြည့်ရှု ရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပုံစံ နှစ်မျိုး လုံးတွင် ဖျော်ဖြေပွဲ ၃၁ ခုပါ ၀ င်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည်။ သို့သော် မူကွဲ နှစ်ခု၏ အပြုအမူ အချို့သည် ကွဲပြားခြားနား ပြီး တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ထင်ဟပ် စေရန် အထူး ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဗားရှင်း အမျိုးမျိုး ရှိသော်လည်း ပြပွဲ နှစ်ခု ကိုကြည့်ရှု သူများသည် မျက်နှာပြင် တစ်ခုတည်း တွင် ဆက်သွယ် နိုင် ဆဲဖြစ်သည်။ တူညီသော ဗားရှင်း ကိုကြည့်ရှု သူများ ၏ပုံမှန် streaming bullet chat အပြင် အသုံးပြုသူသည် reverse streaming bullet chat ကိုလည်း တွေ့ မြင်ရ ပြီး၎င်းသည် message သည်အခြား version ကိုကြည့်ရှု သူ ထံမှ လာ ကြောင်းဖော်ပြသည်။
Stop B သည် နှစ်သစ်ကူး ပါတီ ကိုကျင်းပ သည်မှာ တတိယ နှစ်ဖြစ်သည်။ The Beautiful Night 2020 သည် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် နေစဉ်အတွင်း 2019 မှ လူကြိုက်များ မှု အညွှန်းကိန်း ထက် သုံးဆ ပိုများ ခဲ့ပြီး ၄၈ နာရီအတွင်း ထုတ်လွှင့် မှုပေါင်း သန်း ၁၂၀ ရရှိခဲ့သည်။
Gala သည် ခေတ် ရေစီး ကြောင်းနှင့် နယ်ပယ် အကြောင်းအရာ များအပါအ ၀ င် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ များ ကိုတင်ပြ ခြင်းဖြင့် အကျိုးစီးပွား အမျိုးမျိုး ရှိသော ပရိသတ် များကိုလက်ခံ သည်။ ရိုးရာ နှင့် ခေတ်သစ် ယဉ်ကျေးမှု၊ တရုတ်နှင့် နိုင်ငံတကာ အရ သာ။ ၎င်း သည်တရုတ် လူငယ် များ၏ ယဉ်ကျေးမှု အပေါ်များစွာ အကျိုးသက်ရောက် သည့် ကာ တွ န်း၊ ဂိမ်း များ၊ တေး ဂီ တ၊ ရုပ်ရှင် နှင့် တီဗီ ရှိုး များ၏ အထင်ကရ အိုင် ပီ များကိုလည်း ပြသသည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှစ်သစ်ကူး ပါတီ ဟာ တရုတ် လူငယ်တွေ နှစ်သက် ကြတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို ဆက်လက် လေ့လာ သွားမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့် ပါတယ်” လို့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပါတီ အစီအစဉ် ထုတ်လွှင့် ပြီးနောက် ဘူတာ ဘီ ရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ် ရေး အရာရှိ ချုပ် ကာ လီ လီက ပြောပါတယ်။ “ဂန္ထဝင် အိုင် ပီ နှင့် ယဉ်ကျေးမှု မှတ်ကျောက် ၏ ပြန်လည် အနက် မှတဆင့် ကျနော်တို့ ” ရိုးရာ ” လူကြိုက်များ ” နှင့် ” ဟောင်း စတိုင် ” ‘Avant-garde’ ‘သို့ ယဉ်ကျေးမှု ပေါင်းစုံ ရောနှော ၏ ကျက်သရေ ကိုထင်ဟပ် ။”
ယခုနှစ် ပါတီ တွင်ပြသ ထားသော IP များ ပါဝင်သည်ထရန်စဖော်မာစီးရီး, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အာရုံ ဂိမ်း,League of Legendsနှင့်စစ်မှန်သော ဘုရားသခင် ထိတ်လန့် တုန်လှုပ် မှုနာမည်ကြီး တရုတ် ကာ တွ န်း၊လူ့ ဇာတိနှင့်Link ကိုနှိပ် ပါ,တရုတ် ရုပ် ရှ င်၊ကျည် ဆံ ပျံ ပါစေ. လူ တိုင်းတွင် ဖန်တီး မှုဆိုင်ရာ ဖျော်ဖြေပွဲ များသို့မဟုတ် အံ့သြ ဖွယ်ကောင်းသော mashup များရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ဘူတာ B သည် တရုတ်၏ ထိပ်တန်း ထုတ်ကုန် ၁၀၀ ကို ဖြန့်ချိ သည်Generation Z မှာ ရေပန်းစား
ဥပမာအားဖြင့် ကမ္ဘာကျော် ခရို အေးရှား စန္ ဒယား ပညာရှင် Maxim Mrvica တီးခတ် သောအခါBumblebee ပျံသန်း မှုချစ် လှ စွာ သောထရန်စဖော်မာဇာတ်ကောင် Hornet စင် ပေါ်မှာ ထင်ရှား ။, Mrvica သည် နောက်ပိုင်းတွင် ဖျော်ဖြေ ခဲ့သည်ထရန်စဖော်မာဆင် ဖို နီ နှင့်တရုတ် သံစုံတီးဝိုင်း နှင့်အတူ ရုပ်ရှင် ရမှတ် ။ အခြား Transformers နှစ်ခုဖြစ်သော Optimus Prime နှင့် Megatron တို့ သည်တရုတ် နှစ်သစ်ကူး ပါတီ ပွဲ ၌ Transformers ဇာတ်ကောင် များ ၏ပထမဆုံး ပွဲ ဦး ထွက် ကို ဂုဏ်ပြု ရန်အတွက် ပြပွဲ တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
(Stop B ႏွစ္သစ္ကူး ပါတီ ပြဲ စင္ ျမင့္ ေပၚမွ Transformers ဇာတ္ေကာင္ ၊ ဓာတ္ပံု-Stop B)
8 B-station အကြောင်းအရာ ဖန်တီး သူများနှင့်3e-sport ကစားသမား လွှမ်းခြုံအထီးကျန် စစ်သည် တော်တရုတ် ဆောင်ပုဒ် သီချင်းArcane-League of Legendsဂိမ်း ၏ပထမဆုံး ကာတွန်း စီးရီး ။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ အမြင်အာရုံ သက်ရောက် မှုများ၏ အကူအညီဖြင့် ပါတီသည် ကမ္ဘာကျော် ဂိမ်း မြင်ကွင်း များကို Liyue Harbour စင်မြင့် သို့ ယူဆောင် လာခဲ့သည်။စစ်မှန်သော ဘုရားသခင် ထိတ်လန့် တုန်လှုပ် မှု.
(God of True God God God God God God God God God God God God God God God God God God God God God God
“ဆယ်ကျော်သက် ကနေ အသက် ၃၀ ကျော် အထိ လူတွေ သုံးစွဲ တဲ့ ကာတွန်း တွေ၊ ဂိမ်း တွေနဲ့ ရုပ်ရှင် တွေဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ပညာ ရဲ့ အရေး အပါ ဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သုံးစွဲ သူတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ် ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်း ဖို့ B-Stop Gala မှာ ဂန္ IP ကို ဂုဏ်ပြု ဖို့ အရမ်း အရေးကြီး တယ်” ဟု B-Stop ဒုတိယ ဥက္က president ္ဌ နှင့် B-Stop နှစ်သစ်ကူး ပါတီ ၏အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ Yang Hu ကပြောကြားခဲ့သည်။
“ညနေခင်း ကနေ တစ်ဆင့် ဘူတာရုံ B အသုံးပြု သူတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဗေဒ ကို အပြည့်အဝ ပြသ နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့် ပါတယ်” ဟု ယန် က ဆက်ပြောသည်။ “လူငယ် မျိုးဆက် သည် ယဉ်ကျေးမှု အမျိုးမျိုးကို ကောင်းစွာ နားလည် ပြီး စုပ်ယူ နိုင်စွမ်း ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိ သောကြောင့် ပြပွဲ တစ်လျှောက် ယဉ်ကျေးမှု အမျိုးမျိုး ကိုထည့်သွင်း ထားသည်။ ဘူတာ B ၏ သုံးစွဲ သူများ၏ အရသာ ကို ဖြည့်ဆည်း ရန် အကြောင်းအရာ ဂေဟ စနစ်နှင့် ဘူတာ B ၏ ပူပြင်း သည့် အကြောင်းအရာ များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ စဉ်းစား ခဲ့သည်။ ”
မထင္ မွတ္ တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထံုးစံ ေတြ ေရာ ေႏွာ ထားတဲ့ “mashup” ရဲ႕ လတ္ ဆတ္ တဲ့ ၾကည့္႐ႈ မႈ အေတြ႔အႀကံဳ ဟာ တ႐ုတ္ လူငယ္ေတြ အႀကိဳ က္ တရုတ် soprano အဆိုတော် Guo Sen နှင့် B-station အကြောင်းအရာ ဖန်တီး သူ Pan Hangwei တို့သည် ဂန္ထဝင် နှင့် ပေါ့ ပ် ဂီတ များကို ပေါင်းစပ်ပြီး Bel Canto တွင် သီချင်း များ သီဆို ခဲ့သည်လူဆိုးBilly အဲ ရစ် နှင့်အသက် ၁၀၅ နှစ်မှာ ချစ် ပါ“C” ေတးသီခ်င္း ဟာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္က တရုတ္ အင္တာနက္ မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားခဲ့တဲ့ စြဲ မက္ ဖြယ္ သီခ်င္း တပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ် ထိပ်တန်း ဂီတ ပညာရှင် Li Yanliang သည် ဆင် ဖို နီ နှင့် ရော့ခ် တီးဝိုင်း နှင့်အတူ ဂစ်တာ တီး ပြီး ဂျပန် anime တေးသီချင်း များကို ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:B-station သည် ဖန်တီး သူ အစီရင်ခံစာ MAU ကို ၂. ၇ သန်း ဖြင့် ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်
အချို့သော ပြပွဲ များသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်က B ဘူတာ တွင် လူကြိုက်များသော အကြောင်းအရာ များဖြင့် မှုတ်သွင်း ခံခဲ့ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တရုတ် တီးဝိုင်း Mosaic သည် Rick Astley ၏ s & nbsp ကို တီးခတ် ခြင်းဖြင့် ပရိသတ် ကို နောက်ပြောင် သည်။မင်းကို ဘယ်တော့မှ အရှုံး မပေး နဲ့သူတို့ အမှန်တကယ် ဖျော်ဖြေ မီ ။ Rick Volume သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် B-station အသုံးပြု သူများအတွက် အကြိုက်ဆုံး memes တစ်ခုဖြစ်သည်။
B-site သုံးစွဲသူများ သည်တရုတ် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ကိုလက်ခံ ရန်နှင့် တက်ကြွစွာ မြှင့်တင်ရန် စတင် လာသည်နှင့်အမျှ ပါတီသည် ခေါင်းစဉ် နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဖျော်ဖြေပွဲ များစာရင်း ကိုစတင်ခဲ့သည်။ တရုတ် ကခုန် ပြဇာတ် ၏ မြင်ကွင်း တစ်ခုက ဗြာ ဆ နျ အက: ဒဏ္ landscape ာရီ ရှုခင်း ပန်းချီ ၏ ခရီး,၎င်း၏ လှပသော တရုတ် ဗေဒ နှင့်အတူ ပရိသတ် ကို အထင်ကြီး ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က site B မှ သုံးစွဲသူ ၁၃၆ သန်း သည်တရုတ် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု နှင့်သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာ များ ကိုကြည့်ရှု ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဘူတာ B သည် အော်ပရာ များ၊ ရိုးရာ ပန်းချီကား များ၊ က ဗျာ၊ အစားအစာ စသည်တို့ နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဗီဒီယို ၂ သန်းကျော် တင်ခဲ့သည်။
(ကဗ်ာ အက မွ ျမင္ကြင္း-ဒ ႑ ာရီ ဆန္ ေသာ ႐ႈ ခင္း ပန္းခ်ီ ၏ ခရီး ။ ဓာတ္ပံု-ဘူ တာဘီ)
Site B သည် မျိုးဆက်သစ် များအတွက် အရည်အသွေး မြင့်မားသော အကြောင်းအရာ နှင့် ဖျော်ဖြေရေး ကိုရှာဖွေ ရန်အတွက် ပလက်ဖောင်း တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
၎င်း ၏တတိယ သုံးလပတ် ဘဏ္ financial ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ပလက် ဖော င်းသည် လစဉ် တက်ကြွသော အသုံးပြုသူ ၂ ၆၇ သန်းနှင့် လစဉ် တက်ကြွသော အကြောင်းအရာ ဖန်တီး သူ ၂. ၇ သန်း ကိုစုဆောင်း ထားသည်။ ဗီဒီယို အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုအနေဖြင့် ဘူတာ B သည် လူနေမှု ပုံစံ၊ ဂိမ်း များ၊ ဖျော်ဖြေ ရေး၊ ကာ တွ န်း၊ ဗဟုသုတ နှင့်အခြား အရာ များအပါအ ၀ င် မတူညီသော အကျိုးစီးပွား များပါ ၀ င်သည့် အကြောင်းအရာ များ ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဖော်ပြ ချက်နှင့် အသုံးပြုသူ ဆက်ဆံရေးကို အလေး ပေးသော ပလက်ဖောင်း ၏ထူးခြားသော အသိုင်းအဝိုင်း ယဉ်ကျေး မှုသည် အရည်အသွေး မြင့်မားသော အကြောင်းအရာ များကိုဖန်တီး ရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် မျှဝေ ရန်ဖြစ်သည်။
ဘူတာ Bမူလက "ACG" (ကာ တွ န်း၊ ရုပ်ပြ ၊ ဂိမ်း) ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ များကြောင့် လူသိများ ခဲ့ပြီး ယခုအခါ virtual character business တွင်စတင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။
Industry Feb 17 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 17, 2022